Jibsoo Basic LibreOffice
Jibsoo Bu`uura LibreOffice
Jibsoon kun ogummaa jechoota tokko tokkoo Bu`uura LibreOffice wajin hojetan ibsa.
Yeroo lakkoofsota, LibreOffice Bu`uura jijjiirtu gosa kurnyee fi gargareessaa lakkoofssaa addaanbaasuuf sirna Qindaa'ina gitoo biyyaatti gargaarami.
URLiin (Uniform Resource Locators) iddoo qabeenya kan akka faayilii sirna faayilii keessaa,haalaan Cimdaa qeeyyaa keessaa murteessuuf nama garagara. URLiin murteesituu aaloo, murteesituu Affeertuu fi faayilii fi murteesituu xurree irraa kan ijaarame dha:
Faayidaan URLootaa inni gudaan Intarneetii irrati yeroo fuula saphaphuun ifteessamu dha.Fakkeenyaaf http, ftp, yookiin faaayilii aalootaafi dha.Faayilii murteeesituun aaloo kan gargaaru faayilii qe`ee sirna faayilii irratti yeroo ibsinu dha.
twiipsin safartuu argii hirkattoo malee ta`ee iddoo murtaa`aa fi dheerina argii maalimootaa cirna hundaa keessatti kan hiiku dha. Twiipsin inchii 1/1440ffaa yookiin 1/20 tuqaa maxxansaa ti. Twiipsin inchii 1440 yookiin 567 saantiimeetiraan jiru.
Title is: Jibsoo Basic $[officename]